Indawo yokuhlala yelizwe entliziyweni yeKarst
Isitayile selizwe ikhaya losapho limi kwindawo ezolileyo yezindlu zosapho apho unokonwabela iimbono ezintle zeKarst.
Ikhitshi inazo zonke izixhobo eziyimfuneko kubandakanya i-oveni, i-microwave, isitovu kunye nefriji. Indawo yokutyela inokubamba abantu aba-6. Igumbi lokuhlala linesofa ekhululekile kunye nezitulo ezimbini zokulala. Onke amagumbi okulala anendawo eninzi yezinto zakho. Igumbi lokulala eli-2 lineebhedi ezimbini ezingatshatanga ezinokudityaniswa kwaye zisetyenziswe njengebhedi ephindwe kabini. Igumbi lokuhlambela linebhafu, isitya sokuhlamba, i-bidet kunye nomatshini wokuhlamba, indlu yangasese yahluliwe.
Indlu yayilikhaya lethu losapho kwaye isekelwe kwindawo engaphandle kweSežana. Indawo ikude nomzuzu ukusuka kwindalo. Ime kwindlu enamagumbi amabini, enomnyango wabucala, indawo enkulu yokupaka kunye negaraji yeebhayisekile zakho.
Ngesicelo sikwabonelela ngebhedi yomntwana omncinci ophathwayo kunye nesitulo sabantwana.
I-Sežana yindawo egqibeleleyo yokufumana iKarst kunye nendawo eyingqongileyo. Ukude nemizuzu ukusuka kwifama ye-Lipica stud kunye nebala yegalufa, unokufikelela kwisixeko saseTrieste (eItali) malunga nemizuzu eyi-15 yokuqhuba, ungafika elwandle ngesiqingatha seyure, tyelela umqolomba wasePostojna, omalunga nesiqingatha seyure kude, okanye iStanjel Castle. I-Karst yaziwa ngokutya kwayo kunye newayini, unokufumana incasa yayo kwi-Osmicas ebekwe ngexesha lokwindla nasebusika. Unokunyuka okanye ujikeleze kwiidiliya, uphumle kwigadi yezityalo yaseSežana, tyelela i-Škocjanske okanye umqolomba waseVilenica, ubone umboniso wokukhwela iClassical namahashe eLipizzaner, ujoyine umdyarho okanye uhambe usuku elunxwemeni lolwandle.
Ndiyafumaneka efowunini. Ukuba ufuna naluphi na uncedo abazali bam bahlala imizuzu embalwa kude.